ကြေငြာချက် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ကြေငြာချက်. Show all posts
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင်လုံ၊ လုပ်ငန်း ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် ၊ ၂ / ၂၀၁၇
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၅ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်)
၁။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများအပေါ် အခြေခံ၍ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း ကော်မတီများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းကော်မတီ
(ခ ) လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းကော်မတီ
(ဂ ) စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းကော်မတီ
(ဃ) လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းကော်မတီ
(င ) မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းကော်မတီ
၂။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုလျှင် အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဝင် နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးစီ နှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၅ ဦးစီဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ယခုအခါ သက်ဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့များက လုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် တာဝန်ပေးအပ်မည့် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း များကို ထောက်ခံ တင်ပြလာပြီဖြစ်ပါ၍ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းကော်မတီများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်-
(၁) ဦးခင်ဇော်ဦး (တပ်မတော်)
(၃) စိုင်းကျော်ညွန့် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၄) ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်အောင် (တပ်မတော်)
(၅) ဗိုလ်မှူးချုပ် လှသန်းမောင် (တပ်မတော်)
(၆) ဦးဌေးဝင်းအောင် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၇) ဦးကျော်ကျော်ဟန် (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး)
(၈) ဒေါက်တာစိုင်းဦး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၉) စောအယ်ကလူစေး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၀) စောစံငြိမ်းသူ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၁) စောကူးကူ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၂) ဦးဇမ်ဇမုန် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၃) စိုင်းဘိုးအောင် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၄) ဒေါက်တာတူးဂျာ (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၅) ဦးအောင်ကြည်ညွှန့် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁) ဦးဇော်ဌေး (ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန)
(၂) ဦးစိုင်းလ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၃) ဦးနိုင်ငံလင်း (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၄) ဗိုလ်ချုပ် နေလင်း (တပ်မတော်)
(၅) ဒေါ်ဇင်မာအောင် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၆) ဦးနိုင်ဆွေဦး (ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး)
(၇) ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး (ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန)
(၈) မိဆူးပွင့် (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၉) စောဆဲဗွယ် (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၀) ခွန်သောမက်စ် (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၁) နော်စန္ဒာဝိုင်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၂) ဒေါ်အေးသီတာမြင့် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၃) ဦးတင်ဆွေ (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၄) ဦးဆမ်းဆောင်ကား (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၅) ဦးရွှေမင်း (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁) ဦးလှမောင်ရွှေ (ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်)
(၂) ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၃) မင်းကျော်ဇေယျာဦး (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၄) ဗိုလ်မှူးချုပ် သိုက်စိုး (တပ်မတော်)
(၅) မိကွန်ချမ်း (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၆) ဦးဗရတ်ဆင်း (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး)
(၇) ဦးအောင်နိုင်ဦး (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန)
(၈) ဆလိုင်းထလာဟေး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၉) ပဒိုစောတာဒိုမူး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၀) စိုင်းလျန်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၁) ခွန်တင်ရွှေဦး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၂) ဦးထွန်းနိုင် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၃) ဦးသိန်းထွန်း (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၄) ဦးမားကို့စ် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၅) ဦးသာထွန်းလှ (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁) ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦး (တပ်မတော်)
(၂) ဦးမျိုးဝင်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၃) ဦးတာလှဖေ (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၄) ဗိုလ်ချုပ်တင်မောင်ဝင်း (တပ်မတော်)
(၅) ဗိုလ်မှူးချုပ် စိန်ထွန်းလှ (တပ်မတော်)
(၆) ဦးအင်ထုံးခါးနော်ဆမ် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၇) ဒေါက်တာချောချောစိန် (ပါမောက္ခ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
(၈) စဝ်ဘောင်ခေး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၉) ပဒိုစောအောင်ဝင်းရွှေ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၀) ပူးထက်နီ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၁) ဦးခိုင်ထွန်းဝင်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၂) ဒေါက်တာအောင်မြတ်ဦး (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၃) ဦးစောထွန်းအောင်မြင့် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၄) ဦးမြင့်နိုင် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၅) ဒေါ်နန်းခင်စိန်မြင့် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁) ဦးအောင်စိုး (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၂) ခွန်မြင့်ထွန်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၃) ဦးမြင့်စိုး (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၄) ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းဦး (တပ်မတော်)
(၅) ဦးစိုးဝင်း (အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၆) ဦးဇော်မင်းလတ် (အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၇) ဒေါက်တာဝါဝါမောင် (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန)
(၈) ဦးဆန်နီ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၉) စောဒဲနယ်လ် (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၀) စောလေ့စေး (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၁) စိုင်းစိုင်းငင်း (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)
(၁၂) ဒေါ်ဒွဲဘူ (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၃) ဦးလှခိုင် (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၄) ခွန်ထွန်းရွှေ (နိုင်ငံရေးပါတီ)
(၁၅) ဦးအိုက်ဆော (နိုင်ငံရေးပါတီ)
၄။ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် မိမိတို့အား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အကြောင်းအရာကိစ္စရပ် များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်နှင့် အဆိုပြုချက်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှ တင်ပြလာသော အကြံပြုချက်နှင့်အဆိုပြုချက်များအား အကျေအလည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်း ၃ ခုထက် မပိုသော မူဝါဒ အဆိုပြုလွှာများကို စိစစ်ရွေးချယ်ပြုစုပြီး ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီများ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့အကြား လိုအပ်လျှင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုအတွင်း (သို့မဟုတ်) ကော်မတီများအကြား မဖြေရှင်းနိုင်သည့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိလာပါက ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီသို့ တင်ပြ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရမည်။
(င) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအလိုက် လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ၌ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူဘောင်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်းအရာ အလိုက် အစည်းအဝေးများကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်၏ ရည်ရွယ်ချက် အခြေခံမူများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဆ) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို လုပ်ငန်းကော်မတီအဆင့်တွင် အကျေအလည် ဆွေးနွေးအဖြေရှာ သွားရမည်။ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟုယူဆရသည့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအား လည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးသွားနိုင်သည်။
(ဇ) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
(ဈ) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် လိုအပ်သော ဆပ်ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း၍ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှု ပေးရမည်။
(ည) လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များနှင့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို သတင်းထုတ်ပြန်ရန် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ ပြောကြားခြင်းမပြုရန် ကော်မတီဝင်များမှ ထိန်းသိမ်းရမည်။
(ဋ) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင် အတည်ပြုထားရမည်။
(ဌ) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာကို ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီသို့ တင်သွင်းရမည်။
၅။ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ သက်တမ်းသည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင်လုံ ကျင်းပသည့် သက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များအား အစားထိုးလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုအစုအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အစားထိုး နိုင်သည်။
၆။ လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တာဝန်အရ သွားလာရသည့် ခရီးစရိတ်၊ ချီးမြှင့်ငွေနှင့် လိုအပ်သည့် ထောက်ပံ့မှုများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ မူဝါဒများနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/02/blog-post_333.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, February 17, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ပြည်တွင်းသတင်း, ကြေငြာချက်
ဒုတိယ ၀န်ကြီးများ ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၃ ရက်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ဃ) နှင့်
ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၉) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ယှဉ်တွဲပါ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီးတွင် ဒုတိယ ၀န်ကြီးများ အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေး လိုက်သည်-
(၁) ဦးမင်းသူ ဒုတိယ၀န်ကြီး - သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန
(၂) ဦးလှကျော် ဒုတိယ၀န်ကြီး - စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, December 13, 2016 No comments:
မလေးရှား မြန်မာသံရုံးမှ အသိပေး ကြေညာချက်
၁။ မလေးရှား နိုင်ငံရှိ ရပ်ဝေးနေ မြန်မာနိုင်ငံ သားများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိစ္စနှင့် ကောင်စစ်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ကွာလာလမ် ပူမြို့ရှိ မြန်မာ သံရုံးသို့ လာရောက် ကြရာတွင် ကွာလာလမ် ပူမြို့ အဝေးပြေး ကားဂိတ် (TBS) သို့ နံနက် အစောပိုင်း၌ ရောက်ရှိစဉ် အငှားယာဉ်မောင်း သမားအချို့၏ အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့် လုယက် ခံရမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရ ပါသဖြင့် ရပ်ဝေးနေ မြန်မာနိုင်ငံ သားများ အနေဖြင့် ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ လာရောက် ကြရာတွင် ညပိုင်း ထွက်ခွာသည့် ဘတ်စ်ကား များဖြင့် လာရောက်ခြင်း မပြုကြဘဲ နံနက်ပိုင်း ထွက်ခွာသည့် ဘတ်စ်ကား များဖြင့်သာ လာရောက်ကြပါရန်နှင့် သံရုံးသို့ နေ့လယ် ၂ နာရီအချိန် အထိ နောက်ဆုံးထား ရောက်ရှိ လာကြသူများ အတွက်လည်း ရုံးလုပ်ငန်းများ လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။
၂။ ထို့ပြင် သံရုံး၏ လုံခြုံရေးအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သံရုံးကောင်စစ်ဝင်း ဂိတ်တံခါးအား နံနက် ၀၈၀၀ နာရီ အချိန်တွင်မှသာ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး သံရုံးအဆောက်အဦး အတွင်းသို့ ရုံးကိစ္စဆောင်ရွက်မည့် ကာယကံရှင်များကိုသာ ဝင်ရောက် ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
အခြားမသက်ဆိုင် သူများအား သံရုံးဝင်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ရက်နေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့
From : Kyaw Naing Tun
Originally published at - https://www.facebook.com/pauk.si.96?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, November 22, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ မြန်မာရေးရာ, ကြေငြာချက်
သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီမှ မုန်တိုင်း အန္တရာယ် ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးနှိုးဆော်
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ချက်များ အရ ဘင်္ဂလားပင် လယ်အော် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ်သည် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း (မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေ သများ) သို့ နီးကပ်နေ ပါသဖြင့် အနီရောင် အဆင့် ဟု သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
၂။ အမျိုးသားသဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအနေဖြင့် မုန်တိုင်းသတိပေးချက် သိရှိချိန်မှ စ၍မုန်တိုင်း၏ အဆင့်ဆင့်ရွေ့လျား ပြောင်းလဲ မှုအား စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာ လျှက်ရှိပြီး လိုအပ် သည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင် မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် အမျိုးသား သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်း ကော်မတီ (လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန) သို့ညွှန်ကြား ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-
(က) ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာန၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲ မှုဌာန အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ မိုးလေ၀သဆိုင်ရာ Website များမှရရှိသော အချက် အလက်များနှင့် မိုးလေ၀သ၊ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအား စိစစ်လေ့လာ သုံးသပ်၍ ပြည်သူ လူထု
ဆောင်ရွက်ရန် များ အား ဦးစီးဌာန၏ Facebook Website ဖြစ်သော Relief and Resettlement Department Myanmar ၌ အချိန်နှင့် အညီ ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်း၊
(င) မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်ခြေရှိသည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံးများ အနေဖြင့် မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
အရေးပေါ်ပါက ပြည်သူလူထုအား ဘေးကင်းရာသို့အချိန်နှင့် တြေပးညီရွှေ့ပြောင်း နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်စေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်ရုံးများ ရှိသိုလှောင်ရုံများတွင် အသင့်ထား ရှိပြီးဖြစ်သော စားရေရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ အားလိုအပ်ပါက အချိန်နှင့် တပြေးညီဖြန့်ဝေနိုင်ရေး
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/10/blog-post_883.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, October 24, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ မိုးလေဝသသတင်း, ကြေငြာချက်
ဒေါ်စုရဲ့ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ကို သွားရောက် ခဲ့ပြီး မနေ့ညက ရန်ကုန်မြို့
ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
၂။ နယူးယောက်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း (၁၇-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့၌ နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယင်းနေ့ တွင်ပင် ဘော့စတွန်မြို့ရှိ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် မှ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားချီးမြှင့်သည့် 2016 Humanitarian of the Year Award ကို လက်ခံ ရယူခဲ့ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် (၁၈-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့ တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးမှ ဝန်ထမ်း မိသားစုများနှင့် လည်းကောင်း၊ (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက် လျက်ရှိသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၉-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်း (UNESCO) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms. Irina Bokova ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Lars Lokke Rasmussen ၊ မက္ကဆီကိုသမ္မတ H.E. Mr. Enrique Pena Nieto ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် H.E. Ms. Sheikh Hasina တို့နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
(၂ဝ-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် “Together for the 2030 Agenda: Partnering for Women, Children and Adolescents, to Thrive and Transform the World ” အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေး၌ တက်ရောက်၍ Panelist အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Lyad Ameen Madani အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
၅။ (၂၂-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုံး၌ CNN သတင်းဌာနမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကိုလက်ခံဖြေကြားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ဥက္ကဋ္ဌ Prof. Klaus Schwab? Open Society Foundation တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. George Soros ၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး H.E. Mr. ZeidRa’ad Al Hussein တို့အားသီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းနေ့ညနေပိုင်းတွင် New York Public Library ၌ Academy of Achievement အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် Academy’s Golden Plate Award ကိုတက်ရောက်လက်ခံခဲ့ပါသည်။
၆။ နယူးယောက်မြို့သို့ မသွားရောက်မှီ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့သို့ (၁ဝ-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၃- ၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့ အထိ သွားရောက်ကာ လန်ဒန်မြို့ရှိ မြန်မာ သံရုံး၌ ဥရောပဒေသ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကဒေသတို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ၁၂ ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံ အကြီးအကဲများနှင့် လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဝါရှင်တန်မြို့သို့ (၁၃-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၆-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့အထိ တရားဝင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ကာ အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘာရက်ခ်အိုဘားမားအပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့အကြီး အကဲများ၊ လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/169860
စစ်တပ်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးတို့ ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီဟု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၃ ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
တပ်မတော်နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီတို့ရဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံမှာ တင်ပြ ချက်တွေဟာ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အတွက် ရပ်တည်ချက် သဘောထားတွေ ပြောင်းလဲဖို့ အချိန် တန်ပြီလို့ ကိုးကန့်၊ ပလောင်နဲ့ ရခိုင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေက ကြေညာ ပါတယ်။
ညီလာခံမှာပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA)ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန် လိုက်တာပါ။
“ငြိမ်းချမ်းရေးမူ (၆) ရပ်နဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အခိုင်အမာကိုင်စွဲတင်ပြတဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ရဲ့ တင်ပြချက်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီး ဒီသဘောထား ရပ်တည်ချက်တွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီ”လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆီဦးတည်တာဖြစ်လို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၃ ဖွဲ့ အနေနဲ့ ထောက်ခံကြိုဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရရဲ့ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုအောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာ
တွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်တဲ့အထိ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူတွေ အစုအဖွဲ့တွေ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ညီလာခံ အစည်းအဝေးတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်တယ် လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာတော့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဖက်ဒရယ် လက္ခဏာတွေ ပါနေတယ်လို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်အစုအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီး တင့်နိုင်အေးက ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွေရဲ့ အဓိက လက္ခာတွေ ဖြစ်တဲ့ ရေးဆွဲပြဌာန်းထားတဲ့ နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံး အခြေခံဥပဒေရှိတာ၊ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာနှစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးထားတာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာ ပြည်နယ်တွေအတွက် ပြဌာန်း ချက်တွေ အကျုံးဝင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေမျိုးရှိတာတွေကြောင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ဖက်ဒရယ်ဝိသေသ လက္ခဏာရပ်တွေ ပါရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ ညီလာခံမှာ သုံးသပ်ပြော သွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တပ်မတော်အစုအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးတင့်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပေးအပ်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချပြီး ဥပဒေပြဌာန်းချက်နဲ့အညီ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်၊ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ မိမိဒေသနဲ့ မိမိလူမျိုးတိုးတက်ရေးကို ဆက်လုပ်လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးသွား ပါတယ်။
အလားတူ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးမြင့်စိုးကလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ် ကျင့်သုံးရေး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ့် အခြေခံကောင်း တွေရှိနေတယ်လို့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ (၂၁ရာစုပင်လုံ)ကို သြဂုတ် ၃၁ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ထိ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြီး အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီအစုအဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ပြီး သဘောထား အမြင်တွေ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/167104
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 05, 2016 No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဟု ၀ပြည်နယ် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီ ကြေညာ
၀ပြည်နယ်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ကန့်ကွက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ စီစဉ်ထားတာ တရားမျှတမှု မရှိ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတာတွေကြောင့်သာ ညီလာခံက ထွက်ခွာခဲ့ရတာလို့ ၀ ပြည်နယ်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီက သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကနေ ၀ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထွက်ခွာခဲ့တဲ့အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှာစိုးလို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီး ၀ ပြည်နယ်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၀ ပြည်နယ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တသက်တာလုံး အကြမ်းမဖက်ရေး၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုများကို လေးစားချီးကျုးတယ်လို့လည်း ကြေညာချက်က ဆိုပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ သန်းစိုးနိုင်ကတော့ စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းက မှားတဲ့အမှားဆိုပေမယ့် ကြီးကျယ်တဲ့အမှားတခုလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
“စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမှား ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီအမှားက တော်တော်လေး ကြီးကျယ်တဲ့ အမှားပေါ့ဗျာ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ၀ အဖွဲ့လို အင်အားကြီး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တဖွဲ့ကို လေ့လာရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ ကတ်ပြားတွေ ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့ ဟို မ၀င်ရ၊ ဒီမ၀င်ရ၊ ဟိုမှာ မပါရ၊ ဒီမှာ မပါရတွေ ဖြစ်တဲ့ အခါ ကျတော့ သူတို့က ခံစားမှုတော်တော်လေးဖြစ်ပြီး သူတို့ အထက်ကို တင်ပြတယ်။
သူတို့ အထက်ကလည်း ပြန်လာခဲ့လို့ ပြောလိုက်တာပေါ့။ တခုက ၀ ဘက်က ဒါဟာ သဘောထားနဲ့ လုပ်တာလို့ ခံစားသွားတယ်။ ဒီဘက်ကတော့ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။”
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို တက်ရောက်လာတဲ့ UWSA ‘၀’ ပြည်နယ်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးတပ်မတော်က ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ဟာ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ညီလာခံ ဒုတိယနေ့စည်းဝေးပွဲ မတက်ဘဲ ပြန်သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ကလည်း ၀ ခေါင်းဆောင် ဦးပေါက်ယူချန်းထံ လိပ်မူပြီး ညီလာခံအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်ချက်အချို့ကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တာကို နားလည်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ၀ တပ်ဖွဲ့ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ၁၇ ခုက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/166880
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 03, 2016 No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သော ပူးတွဲ ကြေညာချက်
၁။ အိန္ဒိယ သမ္မတ နိုင်ငံ၏ သမ္မတ ရှရီ ပရာနာ့ဗ် မူကာဂျီး၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် သည် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုလွင် လိုက်ပါလျက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် ဗုဒ္ဓဂယာနှင့် အာဂရာ အပါအဝင် သမိုင်းကြောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အရ အရေး ပါသော နေရာများ သို့လည်း သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။
၂။ ခရီးစဉ် အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် အတူ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုနှင့် ပြည်သူ့ စွမ်းအား ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး နှင့် အခြား အဆင့်မြင့် အရာရှိများ လိုက်ပါ ခဲ့ကြပါသည်။ အိန္ဒိယ သမ္မတ သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်အား သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ သမ္မတ၏ အိမ်တော် (Rashtrapati Bhavan) ၌ တရားဝင် အခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆို ခဲ့ပြီးနောက် ဂုဏ်ပြု ညစာ စားပွဲဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံ ခဲ့ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် မဟတ္တမဂန္ဒီ၏ အထိမ်းအမှတ် ဂူဗိမ္မာန်သို့ သွားရောက် ဂါရဝပြု ခဲ့ပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်အား အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာ ဝန်ကြီး မစ္စစ်ဆူရှမာ ဆွာရာ့ရ်မှ နယူး ဒေလီမြို့၌ လာရောက် တွေ့ဆုံ ဂါရဝပြု ခဲ့ပါသည်။
၅။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတော် အကြီး အကဲက နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် အစိုးရသစ် တက်လာ ပြီးနောက် အိန္ဒိယ န်ုင်ငံ သမ္မတက သမ္မတ ဦးထင်ကျော်အား မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အထွေထွေ ရွေးကောက် ပွဲ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ အောင်မြင်မှု အပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု၍ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အပါ အဝင် မြန်မာ ပြည်သူ အားလုံး၏ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ အတွက် မြန်မာ အစိုးရ သစ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးကို
ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
နှစ်နိုင်ငံ သမ္မတတို့သည် လွှတ်တော် စည်းမျဉ်း ဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကျင့်ထုံး များ၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ် ဆက်ဆံရေး၊ အာဏာနှင့် အရင်း အမြစ်များ ခွဲဝေရေး ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့ အကြုံများကို ဝေမျှရန် ကမ်းလှမ်း ခဲ့ပါသည်။
၆။ သမ္မတဦးထင်ကျော်သည် အိန္ဒိယသမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူဆိုင်ရာ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါ သည်။
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ပြန်လည် သုံးသပ် ဆွေးနွေးကြ ရာ၌ နှစ်နိုင်ငံ အတွင်းသာ မက ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည့် စုံကြွယ်ဝမှုတို့ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အလို့ငှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပိုမို ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း
နှစ်ဖက် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။
ပူးတွဲဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုကော်မရှင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ၊ ပူးတွဲ ကုန်သွယ်ရေး ကော်မတီ၊ နိုင်ငံတော် အဆင့်နှင့် ဒေသအဆင့် အစည်းအဝေးများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ နယ်ခြားရေးရာ ကော်မတီ၊ နယ်ခြား ဆက်ဆံရေး အစည်းအဝေးများ၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန အကြီးအကဲများ အစည်းအဝေး အစရှိသော လက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ယန္တရားများ၏ မူဘောင်အတွင်း ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက် တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်သွားရေး အတွက် ထောက်ခံကြောင်း
ပြောကြား ခဲ့ကြပါ သည်။
၇။ အိန္ဒိယ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက မြန်မာအစိုးရ၏ (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဖေါ်ဆောင်နေမှုကို ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြ ခဲ့ကြ ပါသည်။
၈။ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်တစ်လျှောက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အရေးကြီးသော နှစ်နိုင်ငံ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို တိုးမြှင့်ရေး အတွက်လည်း ထပ်လောင်း ကတိကဝတ် ပြုခဲ့ကြ ပါသည်။
အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ အန္တရာယ်နှင့် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည့် သောင်းကျန်းမှု လုပ်ရပ် အားလုံးတို့ကို တိုက်ဖျက်ရန် ထပ်လောင်း ကတိပြုခဲ့ ကြ ပါသည်။
တစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာနှင့် ပိုင်နယ်နယ်မြေ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို တစ်နိုင်ငံက လေး စားကြောင်းနှင့် တစ်နိုင်ငံကို ရန်လို တိုက်ခိုက်ရန် အခြားတစ်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေကို အသုံးပြုခွင့်အား မည်သည့် သောင်းကျန်းသူ အုပ်စု ကိုမျှ ခွင့်မပြုရေး မူကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးရန်လည်း နှစ်ဖက် လုံးက ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ကြပါသည်။
နယ်စပ်ဒေသများ၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်း လုံခြုံမှုရှိစေရေး အလုံးစုံဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် အရေးကြီး သည့် အလျောက် နှစ်ဖက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား အချင်းချင်း ပိုမို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးအနက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၉။ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံး၏ လုံခြုံမှုနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ခိုင်မာသော နယ်စပ် စီမံ ခန့်ခွဲရေး၏ အရေး ပါမှုကို နှစ်ဖက်စ လုံးက ဖေါ်ညွှန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၀။ ပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေး အတွက် လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေ သည့် နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးပွဲ များကို ရည်ညွှန်းလျှက် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အတွင်း ပင်လယ်
ရေကြောင်း လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု သည် နှစ်နိုင်ငံလုံး အတွက် အရေးကြီးကြောင်း နှစ်ဖက် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။
၁၁။ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာ၊ စက်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းနှင့် သင်တန်း အစီအစဉ် အမျိုးမျိုးအပါအဝင် အခြားသောကဏ္ဍများတွင် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက် ဆဲဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို နှစ်ဖက် ပြန်လည် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၂။ ကုလားတန်မြစ်ကြောင်း ဘက်စုံသုံး ပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို လည်း နှစ်ဖက်လုံးက အားရကျေနပ်မှု ရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းစီမံကိန်း၏ စစ်တွေနှင့် ပလက်ဝအကြား လုပ်ငန်းပိုင်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ မတိုင်မီ အပြီးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု စနစ်များကို အဆောလျှင်ဆုံး ဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း နှစ်ဖက် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ-ထိုင်း သုံးနိုင်ငံ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ နှစ်ခု လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုလည်း နှစ်ဖက်လုံးက အားရကျေနပ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
၁၃။ နယ်စပ်ဒေသနေပြည်သူများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွားအတွက် အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလျှက် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာနှင့်အညီ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသေးစား စီးပွားရေးစီမံကိန်းများ၊ ကားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ကျန်းမာရေး ဌာနများ၊ တံတားများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆက်စပ် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ၌ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အလုံးစုံဖော်ဆောင် ရာတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန် နှစ်ဖက် သဘောတူ ခဲ့ကြပါသည်။
၁၄။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာငွေကြေး အထောက်အပံ့ဖြင့် ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံနှင့် စစ်တွေ အထွေထွေဆေးရုံ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း၏ သိသာသော အောင်မြင်မှု အတွက် နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင် များက အသိ အမှတ်ပြု ခဲ့ကြပါသည်။
အဆင့်မြင့် ဆေးကုသမှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်း များနှင့် အတူ အရေးကြီးသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မြန်မာဘက်က အိန္ဒိယဘက်ကို ကျေးဇူးတင် ရှိကြောင်း
မြန်မာ သတင်း အချက် အလက်နှင့် နည်းပညာ သိပ္ပံ (Myanmar Institute of Information Technology-MIIT) ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် နေပြည်တော် ရေဆင်း တက္ကသိုလ်၌ ဆန်စပါး ဇီဝဥယျာဉ် (Rice Bio-Park) တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ကိစ္စများ အတွက် ကျေနပ် အားရမှုရှိကြောင်း နှစ်ဖက် ပြောကြား ခဲ့ကြပါသည်။
နေပြည်တော်၌ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင်ဗဟိုဌာန (Advanced Centre for Agricultural Research and Education – CARE) တည်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု အခြေအနေ ကိုလည်း သုံးသပ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါဌာနများသည် မြန်မာ့ သတင်း အချက်အလက်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများ အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အကောင်းဆုံးဌာနများအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမ တန်းစား အိုင်စီတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနအဖြစ် ပေါ်ပေါက် လာမည့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ စွမ်းရည်များ မြှင့်တင်ရေးအတွက် အိန္ဒိယ-မြန်မာစင်တာ (India-Myanmar Centre for Enhancement of IT Skills – IMCEITS)၊ ရန်ကုန်နှင့်နေပြည်တော်ရှိ ဘာသာစကား လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခန်းများ (languages lab)၊ နေပြည်တော်ရှိ e-Resource Centre နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့ရှိ (Central Land Records Development Training Centre – CLRDTC) အတွက် ကွန်ပျူတာ စနစ် ထည့်သွင်းရေးတို့ကို အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အပေါ် နှစ်ဖက် အားရကျေနပ်မှု ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါ သည်။
မြန်မာ အစိုးရက ဦးစားပေးအဖြစ် မှတ်ယူထားသည့် ကဏ္ဍများအတွက် အသေးစားဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရေး ကူညီထောက်ပံ့ ရန်လည်း အိန္ဒိယဘက်က ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား သင်တန်းပေးရေး၊ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဆိုင်ရာ သရုပ်ပြသခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင် ရည် မြှင့်‌တင်ရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအား အိန္ဒိယနိုင်ငံက အကူအညီပေးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။
နှစ်နိုင်ငံစက်မှုလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များ ဖလှယ်ရန်လည်း နှစ်ဖက် သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။
၁၅။ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဏများ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး
အတွက် နှစ်ဖက် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အခြေအနေများအပေါ် လိုက်လျော ညီထွေ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ သဖြင့် ကျေနပ်အားရကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ကြ ပါသည်။
နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးအတွက် ကြန့်ကြာမှု အဟန့်အတားအမျိုးမျိုးကို ဖော်ထုတ် ဖယ်ရှားကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊
မေလက ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော အိန္ဒိယ-မြန်မာ စီးပွားရေး သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲသို့ အိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် အိန္ဒိယ စီးပွားရေး အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အကျိုးရှိသော သုံးသပ်ဆွေးနွေးချက်များ အပေါ် နှစ်ဖက်လုံးက ကျေနပ်အားရကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေး ရုံ၊ မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ဍများ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပြင်ဆင်လျှက် ရှိကြောင်းနှင့် ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမြန်မာ ဘက်က ကူညီပေးစေလိုကြောင်း အိန္ဒိယဘက် ကပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ရန် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့မှုကို အိန္ဒိယ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း က ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလျှက် ယင်းဘဏ် ခွဲရုံး ဖွင့်လှစ်ရေး အတွက် အကူအညီပေးရန် ပန်ကြားခဲ့ပါသည်။
နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်း ဝယ်ဖောက်ကားမှု ချဲ့ထွင်ရေး အတွက် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်နိုင်ရေးက ကြီးစွာ အထောက် အကူ ဖြစ်စေသည်ဟု နှစ်ဖက်လုံးက ယုံကြည်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
၁၇။ နယ်စပ်ဈေးများမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှု စတင်နိုင်ရေးအတွက် နယ်စပ်ဈေးများ ဖွင့်လှစ် လည်ပတ် နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို မကြာမီသဘောတူညီမှု ရရှိနိုင်ရေး အတွက် နှစ်ဖက်လုံးက မျှော်လင့်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
၁၈။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပဲမျိုးစုံ ကုန်သွယ်တင်ပို့ရောင်းချရေးအတွက် ဆက်သွယ် စီမံဆောင်ရွက်မှုသည် မြန်မာ ပဲစိုက်တောင်သူများနှင့် အိန္ဒိယ စားသုံးသူများအတွက် နှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည် ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက် လုံးက သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာ ပဲစိုက်တောင်သူများကို အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ပဲများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှု တိုးမြှင့်ရန်နှင့် အိန္ဒိယဈေးကွက်သို့ ပိုမိုထိုးဖောက် ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်း ရှိစေရေး အတွက် အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုရန် နှစ်ဖက်လုံးက အားပေး ထောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
၁၉။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး မိုရေး-တမူးနယ်စပ်ကို ဖြတ်၍ အိန္ဒိယဘက်က လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့မှုကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ပမာဏအနည်းငယ်သာ ရှိသေးသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပိုမိုပေါင်းစည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်
နှစ်ဖက် သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။ အနာဂတ်ကာလတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက် ဖြန့်ဖြူးမှုကွန်ယက် အခြေခံ အဆောက်အအုံ အဆင့်
မြှင့်တင်ရေးကို နှစ်ဖက် အလေးထား စဉ်းစားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀။ အဓိကကျလှသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၌ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်ကို ချမှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးဆောင်ရွက်ရန် နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်များက ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။
၂၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအား တိုးတက် စေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အလို့ငှာ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံများအတွက် ရည်ရွယ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် မိတ်ဖက် စွန့်ဦးလုပ်ဆောင်မှု (International Solar Alliance Initiative) ၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအား ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
၂၂။ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများသည် ရေနံရှာဖွေရေးနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် ပိုက်လိုင်းကဏ္ဍများ၌ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
ရေနံဓာတုနှင့် ရေနံထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် LMP terminal များ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေး အတွက် တင်ဒါ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ များ ကို ဖိတ်ခေါ်ရန်မြန်မာ ဘက်က သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
၂၃။ နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်ရှိ ယဉ်ကျေးမှု အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်လျှက် ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍများတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု ပိုမို တိုးမြှင့်ရေးအတွက် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
Archaeological Survey of India ၏ ပုဂံရှိ အာနန္ဒာဘုရား ပြုပြင်မွမ်းမံရေး စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများကို အားရကျေနပ်ကြောင်း နှစ်ဖက်လုံး က ပြောကြား ခဲ့ကြပါသည်။
ဗုဒ္ဓဂယာရှိ မင်းတုန်းမင်းနှင့် ဘကြီးတော်မင်းတို့၏ ကျောက်စာ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းကိုလည်း အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာငွေကြေး အထောက်အပံ့ဖြင့် Archaeological Survey of India ကပင် ဆောင်ရွက်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယဘက်က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ပူးတွဲ နည်းပညာအထောက်အပံ့ ပေးအပ်ရန်လည်း နှစ်ဖက် သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်ကျင်းပခဲ့သော အိန္ဒိယပွဲတော် ကိုလည်း နှစ်ဖက်လုံးက အား ရကျေနပ်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ ကြပါသည်။
၂၄။ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်းလမ်းနယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်း၍ နှစ်ဖက်ပြည်သူများ ချောမွေ့စွာ ကူးသန်းသွားလာ နိုင်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ရေးတို့ အတွက် အားပေးရန် နှစ်ဖက်လုံးက သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။ တမူး-မိုရေး နှင့် ရိ-ဇိုခေါဒါ နယ်စပ်ဂိတ်များ၌ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ရုံးများ ဆောလျင်စွာ ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စ ကိုလည်း နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၂၅။ နှစ်ဖက်လုံးက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးတွင် နီးကပ်စွာ အတူတကွ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန် ထပ်လောင်းကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြပြီး၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ၌ အရေးကြီး သောကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားရေး ရပ်တည်ချက်များအ‌ပေါ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ ခဲ့ကြပါသည်။
အကြမ်းဖက်ဝါဒသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကြောင်းနှင့် မည်သို့သော အကြမ်းဖက် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ကိုမျှ လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်း အလေးအနက် အထားပြောကြားလျှက် အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစနစ် ပိုမိုအားကောင်း လာစေရေးအတွက် နှစ်ဖက် လုံးက တိုက်တွန်း ခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂ ၌ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျှက်ရှိသည့် နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Comprehensive Convention on International Terrorism) ကို ဆောလျင်စွာ အပြီးသတ်နိုင်ရေးအတွက် တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကို (၂၁) ရာစု၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အညီ နိုင်ငံအများစု ကပိုမိုကိုယ်စားပြု နိုင်ရေး၊ ပိုမိုထိရောက်‌ကောင်းမွန်သော အဖွဲ့အစည်း ကြီးဖြစ်လာရေး အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလုံးစုံ ကြိုးပမ်းမှုတွင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီကို ဆောလျင်စွာ ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းရေးသည် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြပါ သည်။
ပြန်လည်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားသော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကြိုးပမ်းမှု ကို မြန်မာနိုင်ငံက ထောက် ခံကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၆။ အားလုံးပါဝင်သည့် ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှု အပါအဝင် အခက် အခဲများကြားမှ ဆောင် ရွက်နေ ဆဲဖြစ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်း စဉ်၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အစည်း အဝေးများ၌ ဆွေးနွေးစဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် အိန္ဒိယ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အကြား နီးကပ်စွာ အတူတကွ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက်လုံးက သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှု စာချွန်လွှာ
၂၈။ ဘင်းမ်စတက် အဖွဲ့အစည်း အားဖြင့် ဒေသဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးမြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်ကို နှစ်ဖက်လုံးက ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် The Outreach Summit between BRICS and BIMSTEC သို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ရန်ရှိပါကြောင်း မြန်မာဘက်က အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၉။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် ၎င်းနှင့်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိစဉ် ကာလအတွင်း နွေးထွေး ပျူငှာစွာ ဧည့်ဝတ်ကျေပြွန် ခဲ့သည့်အတွက် အိန္ဒိယသမ္မတအား ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၃၀။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် အိန္ဒိယသမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တို့အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ဖက် အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ပါ ရန်လည်း ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယဘက် ကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံလျှက် နှစ်ဖက်အဆင်ပြေမည့် နေ့ရက်အချိန်ကို သံတမန်လမ်းကြောင်းမှ တစ်ဆင့် ညှိနှိုင်း
ဆောင်ရွက် ကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/blog-post_425.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, August 30, 2016 No comments:
အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန အလှကုန်ဆိုင်ရာ အသိပေး ကြေညာချက်
၁။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာနသည် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ လုပ်ပိုင်ခွင့် အရ အလှကုန် ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ အမိန့် (၁/၂၀၁၀) ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက် တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဆိုပါ အမိန့်အရ ပြည်တွင်း၌ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချသော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အစားအသောက် နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်လျှောက်ထားရမည်ဟု ပါရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အလှကုန်ပစ္စည်း အချို့သည် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန၌ မှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။
၃။ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနသည် အလှကုန်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ အလှကုန်ပစ္စည်း ဈေးကွက်တင် ရောင်းချသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၀) ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် အထူး လိုအပ်ပါသည်။
၄။ အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၀)ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/blog-post_975.html
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု အပေါ် သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
လက်ရှိ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များ အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ အမှန်တရားနှင့် မျှတမှု အမျိုးသား ပါတီ(MNTJP/MNDAA)၊ ပလောင် ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (PSLF/TNLA)၊ ရက္ခိုင် အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (ULA/AA) တို့က သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ကို ယနေ့(သြဂုတ် ၁၈ ရက်) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာ လိုက်သည်။
ယင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံကို သြဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဟု ဆုံးဖြတ် ခဲ့ခြင်းကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ မိမိတို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် အဆင်သင့် ရှိကြောင်း၊ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများ အားလုံး အတူတကွ လုပ်ဆောင် နေသော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် မိမိတို့ အနေဖြင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကို အပြန် အလှန်ရပ်စဲပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ဒေသ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး တို့ကို နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် နည်းဖြင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒ အပြည့် အ၀ရှိကြောင်းတို့ ပါဝင်သည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, August 18, 2016 No comments:
အရေးပေါ်ကာလ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
ဆန္ဒပြမှု၊ ဆူပူအကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှု အခြေ အနေများကို ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အရေးပေါ် ကာလ စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီကို ဒုတိယ သမ္မတ(၂) က ဥက္ကဌ တာဝန် ယူကာ ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၅၂/ ၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်)
၁။ ဆန္ဒပြမှု၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှု အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် “အရေးပေါ်ကာလ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟို ကော်မတီ” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-
(က) အစိုးရ၏ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ အစည်းများကြား ထိရောက်သည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုများ ပြုလုပ် နိုင်စေရန်၊
(ခ) ပြည်နယ် အစိုးရများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် လျင်လျင်မြန်မြန် ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် (Rapid Response) စီမံပေးရန်
(င) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်သူကို ဗဟိုပြုသော ရဲလုပ်ငန်းစနစ်အား မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊
ကျေးရွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆက်စပ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊
(ဇ) နိုင်ငံရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့် အထွေထွေ ဆန္ဒပြမှု အသွင် ပြုလုပ် လာပါက ပြည်သူ့ အားဖြင့်
ပြန်လည် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှုဖြင့် ချေဖျက်ရန်၊
(ဈ) ဆန္ဒပြမှု၊ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် သတင်းရရှိရေးအပြင် ဆန္ဒပြ ဆူပူ အကြမ်းဖက်နေစဉ်ကာလ လှုပ်ရှားမှု သတင်းမှန်သမျှကို ရယူ မှတ်တမ်း တင်ပြ ထားပြီး မမှန်မကန်
ဝေဖန် ထိုးနှက်မှုများ ရှိပါက ထုတ်ဖော် တုံ့ပြန်ရန်၊
Originally published at -https://www.facebook.com/7daynews
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, July 15, 2016 No comments:
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး website တံဆိပ်
၁။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၀ နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များ အရ “ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် များဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-
(ဃ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန
(င) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(စ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(ဆ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(ဇ) ဦးကျော်တင့်ဆွေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန
(ဈ) ဒေါက်တာဖေမြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
(ည) သူရဦးအောင်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
(ဋ) ဒေါက်တာအောင်သူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
(ဌ) ဦးသန့်စင်မောင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(ဍ) ဦးအုန်းဝင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
(ဎ) ဦးဖေဇင်ထွန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
(ဏ) ဦးသိန်းဆွေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန
(တ) ဦးခင်မောင်ချို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
(ထ) ဒေါက်တာသန်းမြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
(ဒ) ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
(ဓ) ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
(န) ဦးကျော်ဝင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
(ပ) ဦးဝင်းခိုင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(ဖ) ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန
(ဗ) ဦးအုန်းမောင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန
(ဘ) နိုင်သက်လွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(မ) ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး
၂။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အရ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ရာထူး အလျောက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 26, 2016 No comments:
ပြည်ထောင်စု အင်္ဂါစဉ် သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ဧပြီ ၂၇ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု အင်္ဂါစဉ် သတ်မှတ် ချက်အား ထုတ်ပြန် ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ပြီးလျှင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ကို နံပတ် ၂ နေရာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ထုတ်ပြန် လိုက်သော ပြည်ထောင်စု အင်္ဂါစဉ်မှာ
၁၉ ဝန်ကြီးချုပ်များ ၂၀ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ
၃၄ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များ
၃၆ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ
မိုးသီးမုန်တိုင်းကျလျင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ အစိုးရ ထုတ်ပြန် အသိပေး
မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး မိုးကြိုးပစ်တဲ့ အခါ မိုးသီး မုန်တိုင်းများ ကျရောက်တဲ့ အခါ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များကို ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာ ချထားရေး ဦးစီးဌာနက သတိပေး ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
– တိမ်မဲလာခြင်း၊ လေပြင်းလာခြင်း၊ မိုးသည်းထန်လာခြင်း၊ မိုးခြိမ်းပြီးအတော်ကြာမှ လျှပ်ပြက် လာခြင်း၊ အပူထုထဲတွင် လေအေးများကို ခံစားရခြင်းများသည် မိုးသီးမုန်တိုင်း၏ လက္ခဏာ များ ဖြစ်ပါသဖြင့် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာပါက အထူးသတိပြုနေထိုင်ပါ။
– ကျေးလက်တောရွာများတွင် လယ်ကွင်း၊ ကွင်းပြင်ထဲနေထိုင်ခြင်းမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားပါ။ တတ်နိုင်သမျှ အိမ်ထဲတွင်နေထိုင်ပါ။
– မဖြစ်မနေအိမ်ပြင်သို့ ထွက်ရမည်ဆိုပါက ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကဲ့သို့ ဦးထုပ်အမာများ ဆောင်းပါ။ အ၀တ်ထူများဝတ်ဆင်သွားပါ။ မိမိကိုယ်ကို အကာအကွယ်များပြုလုပ်သွားပါ။
– အိမ်ထဲတွင် နေထိုင်စဉ်လည်း ခိုင်ခံသည့် အမိုးအကာအောက်တွင် တတ်နိုင်သမျှနေထိုင်ပါ။ နှစ်ထပ်အိမ်များဖြစ်ပါက အိမ်အောက်ထပ်တွင်နေပါ။
– အိမ်အမိုးများကို ခိုင်ခံအောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
– အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ကျွဲနွားများအတွက်ခိုလှုံစရာစီစဉ်ပါ။ မိုးသီးကြီးများသည် တိရိစ္ဆာန်များ ကိုအသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်စေနိုင်ပြီး တကယ်ရွာနေချိန် မိမိတို့လည်းအပြင်မထွက်နိုင် သဖြင့်ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
– ယာဉ်များ၊ ပစ္စည်းများအပြင်တွင်မထားပါနှင့်။ ကားများကိုဂိုဒေါင်ထဲထည့်ပါ။ အမိုးသာ ရှိပြီးအကာမရှိသည့်အောက်တွင် ဘေးမှထိနိုင်သဖြင့်စောင်ကာပါ။ လမ်းများပေါ်တွင် ထားရပါက စောင်အုပ်ပါ။
– ပြတင်းတံခါးများအသေအချာပိတ်ထားပါ။ မပိတ်မိ၍ မိုးသီးများအရှိန်ဖြင့်ဝင်လာပါက အိမ်တွင်းပစ္စည်းများပါပျက်စီးနိုင်မည်။ လိုက်ကာများပါပိတ်ထားပါ။ ပြတင်းမှန်ကွဲခဲ့ပါက လိုက်ကာခံနေမည်။ ပြတင်းပေါက်နားရှိပရိဘောဂများကိုလည်းကြိုတင်ရွှေ့ထားပါ။
– မိုးရွာသွန်းနေစဉ်၊ မိုးခြိမ်းနေစဉ်၊ လျှပ်စီးလက်နေချိန်များတွင် ဖုန်းများကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
– တီဗွီ၊ ရေဒီယို၊ လျှပ်စစ်ထမင်းအိုး၊ လျှပ်စစ်မီးပူနှင့်ကွန်ပျူတာ စသည့်လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်း ခလုတ်ပိတ်၍ ပလပ်ဖြုတ်ထားသင့်ပါသည်။
– သစ်ပင်၊ ဓါတ်တိုင်နှင့်သံ/သတ္ထုပစ္စည်းများအနီးတွင် မနေသင့်ပါ။ လျှပ်စစ်စီးကူးလွယ်သည့်
ပစ္စည်းများနှင့်ဝေးရာတွင် နေထိုင်သင့်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မိုးသီးကြွေကျ ခြင်းများ၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပြုလိုက်နာနေထိုင်ကြပါရန် အထူး မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံ - အောင်အောင်နိုင်
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/146618
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, April 24, 2016 No comments:
အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ရေး အရာရှိကို မီဒီယာကြီး တခု ငွေပေးသည့် ကိစ္စ သမ္မတရုံး အသိပေး ထုတ်ပြန်
မီဒီယာကြီး တခုက အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကိုယ်ရေး အရာရှိကို ငွေပေးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးက ဒီနေ့ ရက်စွဲနဲ့ ပညာပေး အသိပေးချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/146013
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, April 21, 2016 No comments:
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်လွှတ်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားတွေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် နည်းလမ်း ၃ ရပ်နဲ့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ဒီနေ့ ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်…
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/143565
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 08, 2016 No comments:
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်း
သမ္မတသစ် ဦးထင်ကျော် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ကြေညာ ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါ ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့မှာ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၊ ဒုသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၁ နဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရ ခုလို ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ သမ္မတရုံး ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/142266